archana: March 2011
Posted by archana at 3/28/20112comments:
it goes with jhalak man gandraba style hai..
आमैले सोध्लिन नि के काम गर्छ छोरो भनी
काम सजिलै छ भन्दिए!!
बाबैले सोध्लान नि के काम गर्छ स्वाठ भनी
काम सिक्दै छ भन्दिए!!
दाईले सोध्लान नि के काम गर्छ लठ्ठु भनी
काम गार्हो छ भन्दिए!!
भाईले सोध्ला नि के गर्नु हुन्छ दा भनी
खर्च कम गर भन्दिए!!
बहिनीले सोध्ली नि के काम गर्नु हुन्छ दादा भनी
तिहारको हिसाब गरी राख भन्दिए!!
साथीभाइले सोध्लान नि के काम गर्छ यार भनी
बिदेश नआउ यार भन्दिए!!
प्रियाले सोध्लिन नि काम गर्छ उ भनी
दुई- चार बर्ष कुर भन्दिए!!
एक्स्-प्रियाले सोध्लिन नि के काम गर्छ भनी
एकदम मोज छ तिमीले मिस ग-र्यो भन्दिए!!
छिमेकीले सोध्लान नि बाबु के काम गर्छ भनी
बैंकमा म्यानेजर छ भन्दिए!!
बिदेशमा पढ्न गएको !!
कहिले cleaning कहिले kitchen hand गरेको!!
कहिले university कहिले housekeeping गरेको!! दु:ख के हो राम्रै सँग बुझेको!!
पढि लेखी ज्ञानी गुनी भै आमा तिमीलाई भेटन आउछु भनी सोचेको!!
Posted by archana at 3/28/2011 8 comments:
नहान है बाटोमा नचिनेको मान्छेलाई आफु आफु मात्र खेल । बिहान देखी बुवाआमाले भाई र भाईका साथीहरुलाई भन्दै हुनु हुन्थ्यो केटाहरु के मान्थे आँखा झिम्मिक के गरेका थियौ, आफु आफु खेल्दा खेल्दै प्वाकै एउटा केटीको टाउकोमा नै हानेछन्। त्यस पछी ति केटी पनि कम रहिनछिन् हातमा अटेको ढुङ्गा लिएर झ्याम्मै घरको झ्यालमा हानिन घरको झ्यालको सिसा झ्याम्मै। तेती मात्रै होइन उनले बाउ, बाजे, जिजु बाजे सबैलाई सराप्न भ्याइन । तह नलागेका बिग्रेका छाउडाहरु रे । लोला पिडितको गालिले कान भरिए पछी बुवा र आमाको गाली त बोनस छदै थियो।
एकछिन अघी सम्मको रमाइलो बातावरण शान्त हुन्छ। होलीको रमाइलो तेतिकै न्यास्रो हुन्छ। भाईहरुले अब जिन्दगी बाटोमा नचिनेकोलाई हान्ने छैनन तर यदा कदा यो कुरा सम्झेर हामी खुब हास्छौ। सराप लाग्ने भए हामी मरी सकिन्थ्यो भनेर।
अब गल्ती कस्को भन्ने बाउ आमाले त नहान नै भन्छन जोसमा होस हराए पछी केटाकेटी बाटोमा हिंड्नेलाई प्वाक्क अझ कोही कोही त होलीमा लोलाले नहाने फुलले हान्ने त भन्छन?
वास्तवमा रङहरु मलाई असाध्य मन पर्ने भए पनि होली पटक्कै मन पर्दैन कारण हो लोला। होली आउनु १ हप्ता देखी लोला का सुम्ला खाएका नमिठा अनुभव छन्। कस्लाई गाली गर्ने वर पर कोही देखीने भए पो कौसी र झ्यालबाट हानेर लुके पछी कसलाई गाली गर्नु।
अब अहिले लोला हान्नेलाई पुलिस ले पक्डने रे, लोला नहान्न माइकिङ गरेका छन् रे । अब काठमाडौंको सबै ठाउँमा पुलिस पुराएर कहाँ सक्नु बरु त्यो लोला बेलुन बेच्नेलाईनै कारबाही किन गर्दैनन ? पसलमा चाँही खुल्लम खुल्ला बेच्न दिए पछी केटा केटी हरु किन्छन हान्छन।
Posted by archana at 3/17/20116comments: